Maxay Tahay Xusuustaada Telefoonnada Dadweynaha? -Wararka-Yuyao Xianglong Isgaarsiinta Warshadaha Co., Ltd.
Maxay Tahay Xusuustaada Telefoonnada Dadweynaha?
Waqtiga: 2020-12-02 Hits: 23
Markii taleefannada gacanta aysan caan ahayn, taleefannada dadweynaha ayaa noqday xulashada dad badan ay kula xiriiraan qoyskooda, asxaabtooda iyo xitaa kuwa jecel. Taxanaha TV-ga ee hore, lammaanayaashu waxay sidoo kale kaga hadleen waxa ay ka walaacsan yihiin qolka taleefannada dadweynaha. Tan waxaa laga arki karaa xilligii 2G iyo 3G. Waxaa laga yaabaa in indhaha dhalinyaro badan oo 2000s ah, taleefannada dadweynaha iyo kaararka IC ay yihiin waxyaabo aan la aqoon oo aan la maqli karin.
Taleefanku waa qalab isgaarsiineed oo dadweyne oo laga soo dejiyey dibadda horaantii 1990-meeyadii. Ka dib markaad geliso kaarka IC, waxaad sameyn kartaa wicitaan, kaas oo ilaa xad xallinaya dhibaatada dadka badankood xilligaas; gaar ahaan xerada, kaarka IC, Kaarka kambaska wuxuu mar ahaan jiray mid waajib ku ah ardayda. Khadadka dhaadheer ee wicitaanada laga dhigto goobaha laga dukaameysto ama waababka taleefoonada dadweynaha ayaa ahaa muuqaal u gaar ah wakhtigaas.
Mar haddii taleefanka dadweynuhu la mid yahay isbeddellada cusub. Ku rid xoogaa shilimaad ah, ama geli kaar taleefan oo khafiif ah, oo qor lambarka. Si kasta oo ay u kala fog yihiin labada qof, waxaad isla markiiba ka dhex maqli kartaan codka midkood kan kale kan aqbalaya; hadda shaqooyin badan oo filim iyo telefishan ah, Khadka taleefanka ee dadweynaha ayaa weli ah mid muhiim u ah muujinta jacaylka iyo xiisaha.
Xilligii taleefannada gacanta ee aan caan ahayn, taleefannada dadweynaha ayaa xaliyay degdegga dad badan waxayna badbaadiyeen dad badan.
Caan ka noqoshada taleefannada gacanta ayaa keenay niyad-jabka taleefannada dadweynaha. Hadda, xitaa aag barwaaqo ah, socodka illaa saddex ama shan joogsi, way adag tahay in la helo taleefan dadweyne.
Xaqiiqdii, taleefannada dadweynaha waxay wici karaan lambarrada degdegga ah 110, 119, 120, iyo 122 bilaash. Maalmahan, taleefannada dadweynaha ayaa tartiib tartiib isu beddelaya "taleefannada degdegga ah", kuwaas oo ah kaabayaasha magaalooyinka isla markaana si gaar ah muhiim ugu ah bulshada maanta da 'weyn.
In ka badan boqol sano, taleefannada dadweynaha ayaa had iyo jeer la socda magaalo kasta iyo nolosha dadka; waxay soo gudbisay farxadaha dadka, murugada, murugada, waxayna markhaati ka ahaayeen isbadalada qarniga. Sanadihii la soo dhaafay, taleefanka dadweynaha ayaa umuuqda inuu ka libdhay aragtida dadka, laakiin hadafkeeda taariikhiga ah weli ma dhammaan. Ka dib markii dib loo meeleeyo howlaheeda ganacsi, waxay sii wadi doontaa inay lasocoto dadka si loo soo dhoweeyo berrito.
Xianglong waxay siisaa noocyo kala duwan oo qalab taleefan oo gaar ah iyo adeegyo u gaar ah macaamiisha. Iyadoo 15 sano 'horumar ah, waxaan u habeyn karnaa taleefannada gacanta ee kala duwan, keypads-ka iyo mashiinnada macaamiisha si deg deg ah. Qaadashada inay bixiso keypads-yada warshadaha iyo milatariga jilicsan iyo taleefannada gacanta is Hadafkeena shirkadeena, waxaan diirada saareynaa inaan noqono hogaamiyaha caalamiga ah ee keydka warshadaha iyo taleefannada gacanta ee isgaarsiinta!
Faahfaahin dheeri ah. ku soo dhowow inaad noo soo dirto amaba aad wax ka weydiiso www.yyxlong.com. Waxaan marwalba diyaar u nahay inaan kuguuleysano mashaariic adiga!
Hore: Xianglong Birta IP65 Keypad loo adeegsaday Xakamaynta Helitaanka Xayndaabka Gate
Xiga: Goorma Iyo Xagee Loo Sameeyay Telefoonada Degdega ah ee Jiifka Liiska Magacyada?